Mgbasa ozi na Home Page? | Martech Zone
Mgbasa ozi na Home Page?
Tọzdee, Nọvemba 22, 2007 Satọde, 27 Juun 2015 Douglas Karr
Nghọta bụ eziokwu. Ekwenyere m na nke a, ruo n'ókè ụfọdụ, na nke a bụ eziokwu. Echiche nke onye ọrụ bụ eziokwu nke ụdị ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye isi ha na-arụ ọrụ. Echiche nke ahịa ahụ bụ etu esi azaghachi. The nghọta nke gị ahịa bụ otú ọma gị ụlọ ọrụ bụ.
Echiche nke ihe ịga nke ọma nke blog bụ otu esi eche ya.
Ka m na-elegharị anya na ụgbụ, enwere ụfọdụ ndị ekwenyeghi na monetizing ha blog, na ụfọdụ na do. Dịka m hụrụ saịtị nke ọ bụla ka ọ gbanwee ụdị ha ma gbakwunye mgbasa ozi, ndị na-agụ akwụkwọ ha toro dị ka ego ha si enweta.
You ga - ahọrọ onye na - ahụ maka ụlọ nke chụpụrụ Cadillac ma ọ bụ Kia?
Eleghị anya ọ bụghị. Nghọta bụ eziokwu. Ọ bụ ezie na saịtị m ka na-eto eto na-aga nke ọma, ọ bụ oge m mere ihe iji gụchaa na ọkwa ọzọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abịakwute m ka m kpọsaa na saịtị m ma enweghị m ọnụ ụlọ ahụ, ma ọ bụ usoro zuru oke iji lelee mgbasa ozi ndị ahụ. Ya mere - M mere ụfọdụ ọrụ na isiokwu ahụ.
Emere m ezigbo nlezianya ọrụ na isiokwu ahụ. Achọrọ m inye akwa ntinye maka ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịkwado saịtị ahụ, mana achọghị m iwepụ ọdịnaya ahụ. Ọtụtụ n'ime blọọgụ echekwara nke m na-ahụ n'ezie ngọngọ ndị na-agụ ụzọ na ọdịnaya gaa na mgbasa ozi. Ekwenyere m na nke ahụ bụ nsogbu na enweghị isi. Onwe m na-eleda ịpịgharị site na mgbasa ozi maka ọdịnaya, yabụ ejiri m iwu ọla edo mgbe ị na-emejuputa mgbasa ozi na blog nke m.
Mgbasa ozi ndị a na-ahụkarị 125px site 125px, a mara ezigbo mma ọkọlọtọ na mgbasa ozi na hụrụ ukwuu on Òtù Ụlọ Ọrụ na Pịa abụọ. Mgbe onye na-akwado ya anaghị eji ọkwá ahụ, enwere m ike jupụta ya na mgbasa ozi sitere na otu n'ime ọrụ ndị a ma ọ bụ jiri oghere mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na nke a were gị iwe, enwere m olile anya na agaghị m atụfu gị dị ka onye na-agụ ihe. Na RSS ndepụta enwekarị otu onye nkwado na ala ya, mana ị ga-ahụta obere mgbasa ozi ebe ahụ. Biko marakwa na m na-ajụ ndị mgbasa ozi oge niile. N’izu a, onye chọrọ ịkwụ m ụgwọ nke ọma iji tinye mgbasa ozi bịakwutere m. Mgbe m mere nyocha (aka: Google), achọpụtara m na a na-elelị ha anya na forntanetị maka ịtụkwasị adware na spyware. Ana m eme ka ha mata na agaghị m akwado nzukọ na-eji usoro aghụghọ dị ka nke a.
Nkọwa ikpeazụ m nwere, ndị enyi m nọ na-ekwu okwu banyere 'nkwado nlebara anya' n'isi m. Otu onye nwetadịrị mkpari banyere ya. Nghọta bụ eziokwu, n'ihi ya, m were égbè nke onwe m n'abalị ụnyaahụ na igwefoto MacBookPro iSight wee see ya n'isi. Nke a bụ ka ọtụtụ n'ime gị si mara m… isi awọ na ịmụmụ ọnụ ọchị!
Tags: ebe admgbasa ozimgbasa ozin'ụlọ peeji nke mgbasa ozimgbasa ozi weebụ
Ọ bụrụkwanụ na ndị na-ede blọgụ gara Strike?
Nov 22, 2007 na 3:12 ehihie
Doug mara mma! I kwuru eziokwu, mgbasa ozi ndị ahụ anaghị emetụta ntakịrị. Na mgbakwunye, ụdị ọhụrụ ahụ masịrị m. Ọ dị ọhụrụ.
Nov 22, 2007 na 4:52 ehihie
Ọtụtụ mgbe, m na-agụ blọgụ gị site na RSS, ma taa, m ga-eleba anya na nhazigharị ahụ.
Hmm… maka m ugbu a ọ dị ka igwe mmadụ karịrị akarị, yana mgbasa ozi ọkụ na-egbu maramara bụ ihe na-akpasu iwe n'ịgụ akwụkwọ. Ha na-agbalị mgbe nile ịdọpụ uche n'ihe odide ahụ.
Ọ bụ ezie na anaghị m emegide ị nweta blọgụ ego, ana m akwado inye ederede ohere ya. Whitespace bụ enyi, ọ bụghịkwa ihe ekwesịrị juputara na mgbasa ozi.
Dị ka foto nke gị, echere m na ọ ga-enweta site na ụfọdụ digital darkroom (aka. Photoshop ma ọ bụ yiri) ọrụ. Agba ndị ahụ dị ka ihe na-adịghị ike, ma enwere ihe dị egwu n'akụkụ aka nri, nke na-eme ka ihu gị dịkwuo elu. Ọ dịkwa ka ị naghị ele anya ozugbo n'ime igwefoto, dị ntakịrị gbanyụọ. Yana na-acha ọcha ikuku gbara gburugburu isi gị, nke a na-enye mmetụta dị egwu, guru.
M ga-eseghachi foto ahụ na uwe elu dabara na atụmatụ agba blọgụ gị. Jiri oghere dị ogologo gbaa eserese ahụ, nyekwuo ọdịiche. Ma eleghị anya, ntakịrị ọkụ, iji nweta ọkụ n'anya gị.
Nov 22, 2007 na 6:08 ehihie
Ezi ekele, Doug. Ọkụ gị na-adọrọ adọrọ masịrị m, mana ogbugba ọhụrụ a na-amasịkwa m, ọ na-egosikwa ọnụ ọchị nkeonwe gị. Ụdị ọhụrụ ahụ na-amasịkwa m. Enwere m ike ileghara mgbasa ozi anya ma ọ bụrụ na achọrọ m, ma ọ bụ lelee ha ma ọ bụrụ na achọrọ m, nke bụ otú ọ kwesịrị ịdị.
Nov 22, 2007 na 10:52 ehihie
Obi Ụtọ Ekele!
Nke ahụ bụ usoro mara mma ị nakweere ebe a. Gịnị kpatara na ị gaghị eji mgbasa ozi? Eji m n'aka na ndị mgbasa ozi gị nwere ike soro clicks n'onwe ha 🙂
Nọvemba 23, 2007 na 12:02 nke ụtụtụ
Hey Doug, nwute maka vidiyo ahụ dị na ndepụta Google.. *oops*
Achọpụtara m na ị nwere oghere mgbasa ozi dị. Gịnị ka ha na-aga? Gbaa m email mgbe ị nwere ohere.
Enwere m vidiyo nke ga-eme nnukwu ego karịa $70,000 nke Jaime na ahịa akwụkwọ nke nyere ya ohere imeri nde nde ịntanetị na-esote.
Lelee anya mgbe ị nwere ohere.
Obi ụtọ ụbọchị Turkey!
Nọvemba 24, 2007 na 11:58 nke ụtụtụ
Ibe mgbasa ozi adịla ugbu a!
M ga-ejide n'aka na ị ga-ahụ vidiyo ahụ, abụ m nnukwu onye na-akwado blọgụ gị.
Daalụ! Ma nwee olile anya na ị nwetala ọmarịcha oge ezumike!
Nọvemba 23, 2007 na 11:16 nke ụtụtụ
Nke a bụ n'ezie nleta mbụ m na saịtị gị n'ihi ya, enweghị m ike ikwu maka nhazi ochie gị. Nhazi ọhụrụ gị masịrị m, ọ dị ọhụrụ ma dị ọcha na-enweghị nnukwu mgbasa ozi.
Ejighị m n'aka inwe foto nke onwe gị na blọgụ gị n'agbanyeghị. echere m na ọ na-eme ka ọ bụrụ ahụmahụ nkeonwe ma ọ bụrụ na ndị na-agụ gị nwere ike ịhụ onye ị bụ.
Enwere m olileanya na ị nwere ike mejupụta ebe mgbasa ozi dị na kọlụm aka ekpe n'oge adịghị anya!
Nov 23, 2007 na 12:35 ehihie
Hey Doug, echere m na nhazi ọhụrụ ahụ mara mma. Enweghị m nsogbu na "ọgbụgba glamor" ochie gị, mana nke ọhụrụ dịkwa mma.
Na-elu oké ọrụ!
Nov 23, 2007 na 5:18 ehihie
Emere obere mgbanwe - ụfọdụ dabere na nzaghachi:
Edebere agba ụfọdụ n'ime foto a.
Biputere ya Ibe ọnụego mgbasa ozi
Otu ihe ị nwere ike ọ gaghị achọpụta bụ na anaghị m eri ohere ọ bụla blọgụ mgbe m na-emepụta okirikiri nhọrọ ukwuu.
N'ezie, ihe dị n'ezie dị ntakịrị karịa. M na-agbasawanye obosara nke nhazi ugbu a. M na-agbadakwa nha nkụnye eji isi mee ka ndị mmadụ wee nweta ọdịnaya ngwa ngwa.
Daalụ maka ime ka m mara ihe ị chere!
Nọvemba 24, 2007 na 7:41 nke ụtụtụ
O nwere ike ọ gaghị apụta gị nke ukwuu, mana ị tụfuru m dịka onye na-agụ akwụkwọ. Enwere m ahụ mgbu ogologo oge site na ịzụ ahịa webụ na blọọgụ n'ozuzu ya, echere m na ọ bụ oge m malitere ikewa njikọ m na akụkụ ịntanetị ahụ. Ya mere, ee, daalụ m chere; Ọ tọrọ m ụtọ ịnọrọ ebe a, ma ugbu a, ọ dị m ka mmasi ahụ rikpuru n'ihi oke arịrịọ na-egbu maramara maka ego. (Ma, dị ka akụkụ; mgbasa ozi mmapụta Njikọ Ọdịnaya ga-abụrịrị otu n'ime ụdị mgbasa ozi jọgburu onwe ya emepụtarala)
Nọvemba 24, 2007 na 11:56 nke ụtụtụ
Enwere m obi ekele na ị na-eme ka m mara ma ọ dị m nwute na ị na-apụ. Anaghị m arịọ onye ọ bụla ka o nye m ego, mana echeghị m na ọ bụ mmehie inye ndụmọdụ dị ukwuu n'efu ma gbalịa monetize blọgụ ahụ n'ụzọ zuru oke.
Echere m na ụfọdụ ndị na-eche na m bara ọgaranya ma ọ bụ ihe dabere na ọganihu nke blọọgụ m. Dịka nna nanị ya nwere ụmụ abụọ, onye otu na kọleji, apụrụ m imesi gị obi ike na abụghị m. Abụ m klaasị etiti siri ike, enweghị m ụlọ (ma), ma na-agbasi mbọ ike idobe ego na nchekwa. Ọ bụrụ na m nwere ike nweta ole na ole narị dollars ọzọ nke m blog kwa ọnwa, ọ na-agaghị na-anọ na ezumike n'ụlọ ma ọ bụ fancy ụgbọ ala… ọ na-dị nnọọ na-aga ime na-akwụ ụgwọ nwa m kọleji a obere mfe.
Daalụ maka ịnọrọ n'akụkụ ogologo oge ị nwere!
Nov 24, 2007 na 5:08 ehihie
Ekwenyere m gị na nke a Doug. Aghọtaghị m otú ndị mmadụ dị ka Myk nwere ike isi na-atụ anya blọọgụ na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ iji nyefee ọdịnaya bara uru na-enweghị ego ole na ole.
Ọ bụrụ na ị bụ John Chow nke ahụ bụ otu ihe - ọ gafegoro ntakịrị atụmatụ itinye ego ya. Ma dị ka ị na-ekwu na gị okwu n'elu Doug, ị bụ nnọọ a n'etiti klas nna (dị ka onwe m) na-agbalị itinye nwa gị nwoke na mahadum. Aghọtara m kpamkpam ma kwanyere mmasị gị iji nweta obere ego na blọọgụ gị. Site na nnukwu ọdịnaya nke ị nyere ndị na-agụ gị, ị kwesịrị ma ọ dịkarịa ala nke ahụ.
Nọvemba 25, 2007 na 4:41 nke ụtụtụ
Nke mbụ, Brandon. ndị mmadụ dị ka Myk – boooh.
Naanị mụ na onwe m ka m na-ekwu, yabụ biko emela ka m dị ka m na-ekwu okwu n'ozuzu.
Nye onye ọ bụla nke ya bụ ihe m na-agbalị ikwu. Mana ị maara, a na-ahapụkwa m ka m họrọ blọọgụ m gụrụ na nke m na-adịghị, ma mee ka Douglas mara ihe kpatara ya.
N'ikpeazụ, m ga-ahọrọ onye nnọchi anya ụlọ nke na-agaghị ajụ m ma m ga-anwale ụdị ịsacha ọnụ kacha ọhụrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na m ga-atọ ụtọ sausaji a na-atọ ụtọ n'ezie. ka m na-agbalị ire m ụlọ - mana, ọzọ, nke ahụ bụ naanị mmasị onwe onye.
(Abụkwa m nna, ma ugbu a ọ bụ naanị m na-ebubata ego ahụ, yabụ na ọ naghị adị m mma ịnweta ego, naanị m na-enwe obi abụọ na nke a bụrịrị ụzọ ziri ezi.)
Nọvemba 25, 2007 na 6:48 nke ụtụtụ
M ga-arapara n'ahụ Doug ebe a; ị na-ekwu na ị na-enwe obi abụọ na mgbasa ozi bụ ụzọ ziri ezi isi na-aga maka ịmepụta ego dabere na mgbalị siri ike Doug na-etinye na blọọgụ ya, ma ị naghị enye aro ọ bụla maka atụmatụ ego ọzọ. Ya mere a na m agba gị aka Myk; ma ọ bụrụ na nke a abụghị ụzọ ziri ezi ka esi atụ aro na Doug ụzọ 'ziri ezi', na nke nwekwara ike ịnweta ego?
Nọvemba 25, 2007 na 6:50 nke ụtụtụ
PS M na-ahụkarị bụ ihe na-atọ ọchị mgbe ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere ihe ndị a na-enye ha n'efu. FWIW.
Nọvemba 25, 2007 na 7:06 nke ụtụtụ
Ị hụrụ, Mike, agbaghara m echiche na blọọgụ kwesịrị inwe atụmatụ ego ma ọlị. Ọ dị m nwute, otu ahụ ka ọ dị m. Ọ baghị uru n'ịrụrịta ụka n'okwu a n'ezie.
Enwere m olileanya na ahụghị m ka m na-atụ aro na Doug kwesịrị ịgbanwe ihe maka m. O kwesịghị. O kwesịrị ime ihe o chere na ọ bụ ihe ziri ezi ya blog.
Na dị nnọọ otu ahụ, m ga-enwe ikike ịhọrọ-amasị ya; ma ọ bụ na ọ bụghị, dị ka ọ dị ebe a.
Ma eleghị anya, okwu m bịara dị ka ịkatọ ya, n'onwe ya. Nke na-abụghị ihe m na-agbalị ime. N'ezie, ụzọ ahụ anaghị amasị m atụmatụ ịkpa ego agaala n'ihu nke ịde blọgụ. Yabụ kedu, ọ bụrụ na nke a bụ otu blọgụ a ga-aga, ọ dị mma. Ọ bụghị naanị ihe m chọrọ site na ịde blọgụ, echere m na m tozuru oke ime ihe na mmetụta m.
Maka ịgba m aka. Ọfọn… ka anyị hụ. Echere m na ọ dị mkpa ịmara, na I'mk abụghị otu n'ime ndị chọrọ ihe n'efu. Anaghị m ebudata egwu, anaghị m ebudata fim.
Nke ahụ kwuru. M ga-eji obi ụtọ kwụọ ụgwọ ndenye aha maka blọọgụ a (ọ gwụla ma ọ bụ, dịka $300 kwa ọnwa). Ugbu a, aghọtara m na a ga-enwe ìgwè ndị mmadụ na-eti mkpu ụzọ adịghị n'ihi na ọ bụ ịntanetị na ọ bụ n'efu.
Ee, ee. Ọ bụ nchekwa efu maka mgbasa ozi iwe na mpụta texlink maka ihe Abịaghị m ebe a.
Enwere mgbasa ozi n'akwụkwọ ị gụrụ?
Enweghị m mmasị na mgbasa ozi na usoro TV m. Ọ bụ ya mere m ji azụta DVD. Achọghị m ịnọdụ ọdụ n'ọkara elekere nke mgbasa ozi tupu ihe nkiri amalite, ya mere m ji azụta DVD.
Ana m eme ya ọ bụghị kwere na ihe ọ bụla n'efu na ọnụ ahịa iji mgbasa ozi ndị ọzọ jọrọ njọ bibie blọgụ gị.
I am dị njikere imefu ego. Naanị ọ ga-akara m mma inye ya Doug ozugbo kama ịgafe n'ụdị ndò "pịa ọwa".
Nọvemba 25, 2007 na 10:59 nke ụtụtụ
Enwere m mmetụta nke ọma n'echiche gị ma nwee ekele maka ịkwụwa aka ọtọ gị. Mgbe ndị mmadụ dị ka Facebook na YouTube malitere usoro ego, m na-amalite ịtụgharị anya m.
M na-agaghị na-arụ ụka na ọ bụ n'ụzọ ụfọdụ 'iche' n'ihi na ọ bụ m blog – M nnọọ ịbụ n'ihu na a) ọ nwere ike igbanye ọzọ ego na m nwere ike iji ya! na b) Echere m na enwere nghọta na blọọgụ ego enwetara na ha 'na-aga nke ọma'.
Otu ikpeazụ ndetu: My "Zụrụ m a Starbucks" button eleghị anya mere m ihe dị ka $25 na ikpeazụ 6 ọnwa – ya mere m 'kpọmkwem' ego na-eme mgbalị a dịtụ nke a flop. 🙂
Enwere m olile anya na ị kwụgidere - ị ga-agbakwunye ọtụtụ na mkparịta ụka ebe a!
Site na nkwanye ugwu,
Nov 25, 2007 na 1:38 ehihie
Myk, Anaghị m anwa ime mwakpo nkeonwe, aghọtaghị m àgwà “ihe na-enweghị ihe ọ bụla”.
Nov 25, 2007 na 3:31 ehihie
@Myk: Ị hụrụ Mike, agbaghara m echiche na blọọgụ kwesịrị ịnwe atụmatụ ego ọ bụla. Ọ dị m nwute, otu ahụ ka ọ dị m. Ọ baghị uru n'ịrụrịta ụka n'okwu a n'ezie.
Agaghị m arụ ụka. Ọ bụ uche gị na abụ m onye kwenyere na ị nwere ikike ya. N'ezie echere m na ị na-enweghi ezi uche, na n'otu aka ahụ enwere m ikike maka echiche ahụ, mana ha abụọ bụ echiche na ọ dịghị ihe ọ bụla iji * lụso ọgụ, nri? 🙂
@Myk: Enwere mgbasa ozi na akwụkwọ ị gụrụ?
Ee, a na-akpọ ha “Magazine.” 🙂
Ihe mgbagwoju anya bụ na m dị ụnyaahụ na-eme nchọpụta mgbasa ozi na magazin wee chọta nyocha na magazin.org nke na-egosi stats niile na-egosi na ọtụtụ ndị na-agụ magazin na-ele mgbasa ozi anya dị ka akụkụ dị mkpa nke magazin ahụ, karịsịa mgbe mgbasa ozi ndị ahụ na-elekwasị anya na ndị na-agụ ya.
@Achọghị m mgbasa ozi na usoro TV m. Ọ bụ ya mere m ji azụta DVD. Achọghị m ịnọdụ ọdụ n'ọkara elekere nke mgbasa ozi tupu ihe nkiri amalite, ya mere m ji azụta DVD.
Ị na-atụnyere apụl na oroma n'ọtụtụ ụzọ. Enwere m ike ịsị gị enweghị mmasị na mgbasa ozi ahụ naanị n'ihi na ị na-achọghị ha, mana ọtụtụ ndị anaghị amasị ha, dịka m, n'ihi na mgbasa ozi TV na-etinye nnukwu oge na oge ha. Mgbasa ozi blọgụ adịchaghị mkpa karịa nke ahụ yana (ewezuga mgbasa ozi mmapụta) egbula oge ndị mmadụ, belụsọ ndị ahụ na-ahọrọ iji oge ha na-achịkọta ha. '-)
@Myk: Ekwetaghị m na ihe niile n'efu na-efu iji bibie blọgụ gị na mgbasa ozi ndị ọzọ jọrọ njọ.
Ọ dị mma maka ọtụtụ blọọgụ: "E wezụga nke ahụ Oriakụ Lincoln, olee otú egwuregwu ahụ si bụrụ?"
@Myk: Adị m njikere imefu ego. Naanị ọ ga-akara m mma inye ya Doug ozugbo kama ịgafe n'onyinyo ?pịa ọwa?.
Echere m na ị nọ n'ọnụ ọgụgụ dị egwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ nwere ike ịba uru Doug na ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ ịzụlite akụrụngwa achọrọ iji kwado nhọrọ dị otú ahụ, mana ọ ga-abụrịrị nhọrọ n'ihi na n'ezie karịa 90% agaghị akwụ ụgwọ. Enwere m obi abụọ na enwere ndị mmadụ zuru oke ga-eme ka ọrụ mmepe nke akụrụngwa dị otú ahụ bara uru, mana enwere m ike ịmehie na agaghị m etinye onwe m iji gbochie ihe onye ọzọ chọrọ.
@Myk: N'ezie, anaghị amasị m ka usoro ịkpa ego siri gaa n'ihu ịde blọgụ. Yabụ kedu, ọ bụrụ na nke a bụ otu blọgụ a ga-aga, ọ dị mma. Ọ bụghị ihe m chọrọ site na ịde blọgụ, echere m na m tozuru oke ime ihe n'obi m…. M ga-eji obi ụtọ kwụọ ụgwọ ndenye aha maka blọgụ a (ọ gwụla ma ọ bụ, dị ka $300 kwa ọnwa). Ugbu a, aghọtara m na a ga-enwe ìgwè ndị mmadụ na-eti mkpu n'ụzọ ọ bụla n'ihi na ọ bụ ịntanetị na ọ bụ n'efu.
Ị nwere oke ikike ime ihe na mmetụta gị, ọ bụrụhaala na omume gị kwadoro! (dịka ọmụmaatụ, ịkụ ọkụ n'ụlọ Doug agaghị abụ ụzọ kwesịrị ekwesị isi mee ihe na mmetụta ndị ahụ, n'ezie. nke ihe na-na mgbanwe na ugbu a nke ahụ bụ n'ihu evolved ị na-adịghị amasị ya n'agbanyeghị na ọ na-anọ otú ọ malitere bụ ihe ezi uche na-adịghị.
Akụkọ ihe mere eme nwere ọtụtụ ihe atụ nke ndị na-enweghị mmasị, ha niile na-aghọkwa ihe odide ala ala peeji n'akụkọ ihe mere eme. Dịka ọmụmaatụ, e nwere ndị kpọrọ CD asị n'ihi na ha na-ahọrọ vinyl, mana enweghị afọ ojuju ha egbochighị mgbanwe n'egwú egwu edenye aha na dijitalụ. Yiri ndị kpọrọ mgbasa ozi asị na blọọgụ agaghị eme ka blọọgụ laghachi azụ n'efu; ịde blọgụ ya oke nsogbu ime nke ọma (amaara m, agbalịrị m na anaghị m eme ya nke ọma!) Na ndị mmadụ chọrọ mkpali akụ na ụba iji mee ya nke ọma. N'inye nhọrọ ndị ọzọ niile onye na-agụ nwere, ụdị ndenye aha anaghị arụ ọrụ mana ụdị mgbasa ozi na-arụ ọrụ. Ọbụna New York Times akwagala na mgbasa ozi; NYT chọpụtara na nlebara anya bara uru karịa nchebe: http://www.mikeschinkel.com/blog/attentionhasbecomeworthmorethanprotection/ (Ma ị nwere ike ị gaghị achọ 'eso njikọ ahụ n'ihi na enwere m mgbasa ozi na ibe ahụ.)
Agbanyeghị, akara ala na arụmụka m bụ na enweghị mmasị maka mgbasa ozi na-emetụta naanị gị (na ndị nwere mmetụta yiri ya) yana ọ na-emetụta gị nke ọma; IOW ị bụ onye na-ahapụ mmetụta nke ị họọrọ inwe. Onwere okwu ochie, “Otu jackass gbara otu nwoke ụkwụ. Ọ tụlere ebe ahụ wee malite azụmahịa ya.” Ị nwere ike nweta ọrụ gbasara mgbasa ozi na blọọgụ wee kpata onwe gị obi mgbawa, ma ọ bụ ị nwere ike nabata ya.
Ị sịrị “Arụrịtala isi okwu ahụ” yabụ ị nwere ike iche na m na-arụ ụka mana anaghị m. M na-ekwu okwu banyere iwe iwe banyere ihe malitere na nke na-agaghị agbanwe azụ n'ụzọ ochie na otú nke ahụ nanị na-ebelata àgwà ndụ nke onye na-ewe iwe. Yabụ na nchikota, ọ bụrụ na ị mụta ịnakwere evolushọn a, ị ga-abụ onye nwere obi ụtọ karịa.
Nov 24, 2007 na 4:07 ehihie
Ewepụrụ m ogologo mgbasa ozi dị n'elu otu ibe m, na-enwetakwa ohere karịa na mgbasa ozi ugbu a!
Nov 24, 2007 na 9:07 ehihie
LOL! Ozi gị na-ada ka ị na-agbalị igosipụta ọnọdụ gị ntakịrị ntakịrị! '-) Ime ka nnukwu ihe dị otú ahụ na-adọta uche gaa n'eziokwu ahụ. Naanị mee ya wee gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ndị mmadụ chọrọ ịkatọ ya, nke ahụ bụ nsogbu ha.
BTW, ọ ga-akara m mma iji onye nwe Kia maka onye na-elekọta ụlọ; M ga-eche na ha nwere ohere ka mma inwe ụkpụrụ omume. E wezụga nke ahụ, onye na-anya Cadillac taa nwere klas ọ bụla? Ọ dị mma, nke ahụ bụ na-abụghị Kate Walsh…'-)
Nov 24, 2007 na 10:02 ehihie
N'ezie, Mike. N'ezie, achọrọ m ịkwado mgbasa ozi ndị ahụ - n'oge gara aga, m na-akatọ ndị na-eme mgbasa ozi na ibe ha niile. Otú ọ dị, enwere m nlezianya anya na ntinye na isiokwu a.
Echeghị m na e nwere mmekọrịta dị n'etiti uru na ụkpụrụ ọma - na m hụrụ n'anya ọhụrụ CTS na ga-amasị ụgbọala otu… ma ọ ga-abụ nnọọ a afọ ole na ole tupu m imefusị ego na a okomoko ụgbọ ala - ma ọ bụrụ na mgbe.
Nov 24, 2007 na 10:33 ehihie
Oops, m pụtara ịsị"tụleeỌ bụghịziri ezi'… (Doh! 🙂
Na maka uru na ụkpụrụ omume, ikekwe m na-atụgharị uche m na-eche echiche nke "ntutu na-acha anụnụ anụnụ na Cadillac” ntakịrị oke (nkwupụta e nwetara site na ebe mgbasa ozi redio mpaghara gbasara ọtụtụ ndị na-ere ụlọ.)
Ka o sina dị, nnukwu blọgụ (na ewezuga post a '-p)